भोली बाट विद्यालय बन्द हुने मन्त्रालयले भर्खरै जारी गर्यो यस्तो सुचना ! पुरा पढ्नुहोस् – Gorkhali Dainik
भोली बाट विद्यालय बन्द हुने मन्त्रालयले भर्खरै जारी गर्यो यस्तो सुचना ! पुरा पढ्नुहोस्
April 17, 2021 507
भोली बाट विद्यालय बन्द हुने मन्त्रालयले भर्खरै जारी गर्यो यस्तो सुचना ! पुरा पढ्नुहोस्स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्कुल बिदा गरेर अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न शिक्षा मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ । यो प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता ।डा. समीरकुमार अधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार पछिल्लो समयमा फेला परेका संक्रमितमा विद्यार्थी पनि रहेकाले विद्यालय बन्द गरेर अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको छ ।कोरोना संक्रमितमध्ये पछिल्लो समय १६ प्रतिशत बालबालिका रहेको तथ्यांक छ । “हामीले शिक्षा मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका हौं,” उनले भने । स्वास्थ्य मन्त्री हृदयश त्रिपाठीले पनि अब स्कुलहरु पूर्णरुपमा ।
बिहीबार धनकुटा र तेह्रथुममा भिषण असिना पानी परेको छ । धनकुटाको जिल्ला सदरमुकाम लगायत अधिकांश क्षेत्रमा असिना पानी परेको छ । धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाशुदेव दाहालले जिल्लामा ठूलो असिना पानी परेको जानकारी दिनुभयो । असिना पानीले गरेको क्षति बारे हालसम्म जानकारी नआएको उहाँले बताउनुभयो ।
जिल्लाको माथिल्लो लेकाली भेगमा लगाएको आलुमा असिनाले क्षति पुर्याएको हुनसक्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘हावा हुरी खासै नचलेकोले अन्य क्षति भएको छैन, बालीनालीमा भने क्षति भएको हुनसक्छ’, प्रजिअ शर्माले सनराइज खबरलाई बताउनुभयो ।
असिना पानीले डढेलो नियन्त्रणमा भने ठूलो सहयोग पुगेको उहाँले बताउनुभयो । ‘धेरै ठाउँमा डँढेलो लागेको थियो, ठूलो असिना पानीले त्यसमा भने राहत मिल्यो’, उहाँले भन्नुभयो ।
तेह्रथुमको धनकुटासँग सिमाना जोडिएको क्षेत्रमा पनि ठूलो असिना पानी परेको छ । असिना पानीको कारण सडक समेत अवरुद्ध भएको तेह्रथुमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयराम भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । अवरुद्ध सडक खोल्ने काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । अन्य क्षतिको विवरण भने आइनसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
Prevकोहलपुरमा भएको त्यो भ’यानक बस दुर्घटना: मृत्यु भएका पाँचैको सनाखत
Nextभीषण हावाहुरीका कारण आँप, लिचीमा क्षति